Sevhisi uye Hunhu Kudzora
1. Sarudza zvigadzirwa zvakafanira zvemugadziri akavimbika pamwe nekugadzikana kwakanaka kwekudyidzana.
2. Gadzira "CHECK LIST" kuongorora zvinhu zvemuchina zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi zvemhando yega yega (kunyanya mumiriri wemuno anonyora zvakawanda nezve musika wake wemuno).
3. Akapihwa manejimendi emhando yepamusoro anozotarisa nezvese zvinhu zvakanyorwa pa 'EUREKA Kadhi' kubva pane zvigadziriso zvine chekuita, maonero, mhedzisiro yekuyedza, pasuru uye nezvimwe pamberi pekuti Eureka chitambi chingaiswa pamushini.
4. Kuendesa nenguva.
5. Chikamu cherondedzero ndeyekupa kune mutengi achitaura nezvechibvumirano chekudyidzana kana ruzivo rwekare kuti ave nechokwadi chekubata kwake nguva mushure mekutengesa sevhisi kune avo vanozoshandisa (mumiriri wemuno anonyanya kukurudzirwa). Munguva yevimbiso, kana zvikamu zvakaputsika zvisiri mudura remumiririri, Eureka anovimbisa kuendesa zvikamu mukati memazuva mashanu.
6. Mainjiniya anozotumirwa munguva yekumisikidzwa nehurongwa hwakarongwa uye vhiza inoitwa nesu kana zvichidikanwa.
7. Kodzero yemumiriri inongobvumidzwa nechibvumirano chetatu-pakati peEUREKA, mugadziri uye iye amene kuti ave nechokwadi chekufanirwa nekutengesa kwega kweavo vamiriri vemuno vanozadzisa mavhoriyamu akarongwa munguva yakatarwa yakanyorwa muchibvumirano chevamiriri chekare. Zvichakadaro, Eureka achaita basa rakakosha mukutarisa uye kuchengetedza iyo yega yekutengesa hunhu hweanoshanda.